अर्थ/बजार Archives - Page 44 of 45 - कृषि पत्रिका
कृषि बिमामा १८ करोड अनुदान
बुधबार ०५ असोज, २०७३
काठमाडौं। कृषि बिमाका लागि सरकारले गत आर्थिक बर्षमा १८ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।यस रकममध्ये १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भने भुक्तानी हुन बाँकी छ । कृषकहरूलाई कृषि बिमाका लागि प्रेरित गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले विगत तीन […]
ओखरको व्यापार फस्टाउँदै
डडेल्धुरा। जिल्लामा मौसमी फलफूललगायत तरकारीको व्यवसाय गरेर परिवार धानिरहेका व्यापारि अहिले ओखरको व्यापारमा लागेका छन् । खुद्रा पसल तथा राजमार्गको छेउछाउमा ओखरको व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका बेलामा मौसम अनुसारको व्यवसाय गरेर घरखर्च चलाउने गरेको बसपार्कमा ओखरको व्यपार गर्दैआउनुभएकी तारा ऐर बताउनुहुन्छ । यस याममा लार्खौँ रुपैयाँ बराबरको ओखरको खरिद बिक्री हुन्छ । स्याउलेका अधिकांश व्यापारीले […]
जुम्लाबाट १५ सय मेट्रिक टन स्याउ निर्यात
बुधबार २९ भदौ, २०७३
जुम्ला। जुम्लाबाट यो बर्ष हालसम्म १ हजार ५ सय मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भएको छ । नेपालगंज, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, धनगढी र काठमाडौं लगाएतका शहरमा स्याउ निर्यात भएको हो । जुम्लाको स्याउ निर्यात हुने क्रममा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । गतवर्ष जुम्लाबाट ३४ करोडको स्याउ निर्यात भएकोमा यो बर्ष उत्पादनमा २५ […]
अलैंचीको मूल्यमा भारी गिरावट भएपछी किसान चिन्तित
आइतबार २६ भदौ, २०७३
पाँचथर । अलैंची व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक नेपालले नयाँ उत्पादनको पाँच मन अलैंची प्रतिमन (४० केजी) ६० हजार रुपैयाँमा खरिद गरे । गत वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत कम मूल्यमा उनले अलैंची खरिद गरेका हुन् । पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष यामनाथ काफ्लेले पनि उत्तिनै मूल्यमा १० मन अलैंची खरिद गरेको बताए । गत वर्ष […]
कृषिजन्य वस्तु निर्यातभन्दा आयात ८ गुणा बढी
शुक्रबार २४ भदौ, २०७३
काठमाडौं। नेपालमा दैनिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ । निर्यात भने दैनिक ६ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको हुने गरेको छ । कृषिजन्य वस्तुमा निर्यातभन्दा आयात ८ गुणाभन्दा बढी छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनमा आयात १५ अर्ब १३ करोड र निर्यात १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँबराबरको भएको […]
दाङमा वार्षिक ३ हजार २ सय ७६ मेट्रिकटन माछा आयात
दाङ । दाङमा वार्षिक ३ हजार २ सय ७६ मेट्रिकटन माछा जिल्ला वाहिरबाट आयात हुने गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दाङले बताएको छ । अहिलेको बजार भाउअनुसार यो झण्डै रू. ६५ करोड ५२ लाख मुल्य बराबरको हो । अहिले जिल्लामा एक सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायिक माछापालन भइरहेको र त्यसबाट वार्षिक ६ सय ६१ मेट्रिक […]
पाल्पाको रामपुरमा ससेज उद्योग सञ्चालनमा
पाल्पा । पाल्पाको रामपुरमा पहिलो ससेज उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । रामपुरका युवा राजन पोखरेल र ऋषि पोखरेलले सो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । मासुजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि गरी रामपुर क्षेत्रलाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पोखरेल दाजुभाइले रू. दुई करोड १४ लाखको लागतमा ससेज उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । उद्योगमा ससेज, फ्रेस मिट, सलामी, हेम, […]
खुल्ला सीमा नाकाका कारण अलैँचीमा मिसावटको समस्या
इलाम। नेपाल–भारत खुल्ला सीमा नाकाका कारण गुणस्तरीय नेपाली अलैँचीमा कम गुणस्तरको अलैँची मिसाइँदा समस्या हुन थालेको छ । भारतीय बजार हुँदै नेपाल भित्रिएको कम गुणस्तरको अलैँची मिसावटका कारण नेपाली अलैँची बजार समस्यामा पर्न थालेको हो । नेपाल–भारत खुल्ला सीमा नाका हुँदै नेपाली बजारमा भित्रिने कम गुणस्तरको अलैँची केही व्यापारीले नेपाली अलैँचीमा मिसावट गरी बेच्ने गरेका […]